Eweere m otu afọ site na ọgbakọ, lee ihe mere | Martech Zone
Ọnwa iri na abụọ gara aga abụrụla ndị kachasị na azụmaahịa anyị. Anyị wegharịrị akwụkwọ anyị bụ Martech, weghaara ọfịs anyị ka afọ 7 gachara, wee jiri obi eziokwu wughachi ọrụ anyị site na ala. Ekpebiri m ịhapụ nzukọ n'oge afọ iji lekwasị anya na azụmahịa. N'ezie, emeghị m njem na Florida n'oge niile, ebe m hụrụ ezumike na ileta mama m anya. (Obi adịghị mama m ụtọ banyere nke a!)
Tupu oge a, ekwuru m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ogbako ahịa ọ bụla dị na North America ma kwuo okwu na mba ofesi. N'ezie, otu n'ime nzukọ m kachasị amasị m na-eme ugbu a - Social Media Ahịa Worldwa. M nnọọ n'anya na-ekwu okwu na nzukọ - ọ na-enye m ume na m na-ezute ọtụtụ n'ime gị bụ ndị m nwere mmekọrịta dijitalụ na ma ahụtụbeghị n'ihu mmadụ. Ọ ga-amasị m ịkọrọ otu esi emetụta m na azụmaahịa m.
Ikwu Mgbakọ Mgbasa - Ezi
N'ụzọ na-akpali mmasị, afọ ole na ole gara aga, ndị ahịa anyị na-esite na mpụga etiti ọdịda anyanwụ mejupụtara azụmahịa anyị. Anyị nwere ahịa ofụri coastlines na ụfọdụ nnọọ, nnọọ nnukwu ụdị. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ nnukwu ọrụ na mmefu ego nke mpaghara mmiri na-emefu nke ọma na etiti ọdịda anyanwụ, anyị gbalịsiri ike ijigide mmekọrịta ndị ahụ.
Taa, ndị ahịa anyị niile dị n'etiti etiti ọdịda anyanwụ ma anyị na ha nwere mmekọrịta dị ukwuu. Ọ bụrụ na ha adaba na nsogbu, m na-aba n’ime ụgbọ ala ma gafee iji nyere ha aka. Ọ bụghị n'ezie nhọrọ na ndị ahịa na-esiteghị na steeti. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ iwulite ọnụnọ dị ịtụnanya n'ụlọ, ịga nzukọ nzukọ abụghị ihe dị mkpa.
Dịka m na-ele ndị-ọgbakọ m na-akpakorita na ntaneti, enwere m obi-nsogbu. Ikiri isi ọwụwa njem na ezinụlọ ndị ahapụrụ abụghị ihe egwuregwu. Anaghị m atụ uche ọdụ ụgbọelu, ibi na ngwongwo m, na oge ọrụ na ezinụlọ.
Agbaghara m mmụta? Aga m ekwu eziokwu na amụtaghị m ihe ọ bụla na ọgbakọ ọ bụla nke m na-amụtabeghị n'ịntanetị. N'ezie, site n'ilekwasị anya na ọrụ ndị ahịa yana nsonaazụ ha, enwere m ike ịmụtakwu ihe site na ịdebe isi m n'egwuregwu ebe a n'ụlọ.
Achọtara m ndị na-enwe nzukọ na-enwe obi ụtọ, mana omimi na nkọwapụta zuru ezu anaghị ezu m iji tinye nghọta ha na-arụ ọrụ n'ụlọ. Ọ bụrụ n ’ị na-ekwu okwu n’ọgbakọ, nke ahụ bụ ebum n’uche gị… ebe nke a pụtara na otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ na-ege ntị nwere ike ịgbazite gị ka ị gakwuru ha.
Ikwu Mgbakọ - Ihe Ọjọọ
Dịka m kwuru n’elu, ndị ahịa anyị gbadara nnukwu ụdị na ndị ahịa mba. M ka na-arụ otu ọrụ na-arụ ọrụ Dell, ma ọ bụghị ụdị njikọ maka ụlọ ọrụ anyị ka m na-ejikọ ngalaba Podcast na-ewepụta n'oge adịghị anya. N'ezie, m ọzọ nnukwu njem ga- Dell EMC Worldwa. Ohere ahụ bilitere site n'aka onye ọrụ ibe m na-arụ ọrụ ma gaa Dell, agbanyeghị, enweghị m ike ịgụ ya n'isiokwu a.
Rụghị ụdị nnukwu ọrụ na-ebelata profaịlụ gị obere na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ikwu, mana ụlọ ọrụ dị na Midwest anaghị arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị anaghị arụ ọrụ na nnukwu ụdị. Obi dị anyị ụtọ, anyị enyerela nnukwu ụdị aka nke na ndị mmadụ na-ewere anyị nke ọma n’obodo.
Ka anyi che ya iru, ulo oru ndi na-aga ogbako nwere ahia mmefu ego. Kpọrọ, e nwere nnọọ obere iru eru nke na-edu ndú na a ogbako… ma ọ bụrụ na ha ụlọ ọrụ na-emefu a ole na ole puku dollar na a ogbako tiketi, ha ghọtara na ulo oru mbo na ahịa bụ oké otu. Enwere m ike izute azụmahịa iri na ọgbakọ ma ha niile nwere ego. Enwere m ike izute azụmahịa iri n'ụlọ ma otu n'ime ha nwere mmefu ego. Mgbakọ bụ nnukwu ego na atụmatụ ahịa gị.
Ezie na m kwuru na m na-amụtaghị ihe ọ bụla na nzukọ, oge n'ebe ọrụ na ezinụlọ na-elekwasị anya is Agbaghara. Achọpụtara m na mgbede m na-anọdụ ala na ụlọ mmanya ahụ na ndị ahịa ibe m na-enwe obi ụtọ. Anyị na-ekerịta ihe ịga nke ọma na ọdịda nke a na-enweghị ike ịkpọta n'okwu ma ọ bụ ngosi, na ịnụ eziokwu ndị ahụ na-enye ume n'ihi na ị maara na ọ bụghị naanị gị na mgba na mmeri gị.
Gba Mgbakọ - Ajọ
I huru aha m Douglas Karr, kekọrịta na ndepụta ndị kachasị elu? You na-ahụ m na pọdkastị mba? You na-ahụ m na webinars mba? Nope. Mgbe m toro ndị na - agụ akwụkwọ anyị na ntanetị, gaa n'ihu na - enweta ndị na - ege ntị na nke anyị Ajụjụ ọnụ ahịa ahịa, ma malite ihe ịga nke ọma na-aga nke ọma Obodo Martech, M furu efu a ton nke Chakwasa ihie m ozugbo nwere.
Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ịga nzukọ, ịkwado nzukọ ndị ahụ, na iso ndị ọgbọ m na-a drinksụ mmanya na mmanya na-egbochi m itinye uche.
Kèala dijitalụ bụ ihe ịtụnanya, mana ụmụ mmadụ bụ mmadụ ma ha chọkwara ịkpọtụrụ ibe ha ka ha ghara imebi. Ezie na m bụ a Superstar m nkịta Gambino, m depụtara na ọtụtụ ndị Top 100 si online na afọ gara aga. Mgbe m na-aga ogbako, edepụtara m oge niile na Top 25 nke ndị ọgbọ m.
Ya mere… Ihe Dị Mkpa?
Ma ihe dị mkpa ma ọ bụ na ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe niile banyere amata, mgbe ahụ ee. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ego, mgbe ahụ ọ bụrụ ee. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ịrụ ọrụ na ụdị profaịlụ buru ibu, ee ee. Ọ bụrụ na ọ bụ gbasara nzukọ ndị isi na ụlọ ọrụ gị, ee ee. O buru gbasara imu aka gi? Meh.
Maka m, n’onwe m, ndị juri ahụ apụbeghị. Enwere m mmasị na ntụpọ, mana echeghị m na ọ nwere nnukwu ego. Ahia m di nma karia ka odi na mbu. Na, anyị na-enwe nnukwu echiche n'ụlọ na Indianapolis, na-ewu ụlọ studio na ebe a na-arụkọ ọrụ ebe anyị na-azụ ụlọ ọrụ na-eto eto, na-enye ụmụ akwụkwọ ohere n'obodo, ma na-enyere ọtụtụ uru na-enweghị uru n'obodo.
Tags: ịga nzukọmaraanataramarketingMgbakọ Ahịandị isi ahịamemesama amaokwu ihu ọhamgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozindị kacha ere ahịa
N'agbanyeghị na ịmụtakwu ihe n'ịntanetị karịa na nzukọ, enwere m ezigbo mmasị ịga nzukọ ma soro ndị na-asụ asụsụ ahịa ahịa dijitalụ. Agaghị m agakwuru ha, n'agbanyeghị, n'ihi na ha dị oke ọnụ.
Ikekwe ọ bụrụ na m mere ịde blọgụ zuru ezu na isiokwu iji nweta ihe na-eso, mgbe ahụ a ga-akwụ m ụgwọ ịga ma kwuo okwu, karịa ịnwe swipe kaadị kredit maka ohere ịnọ ebe ahụ.
Ọ na-atọ m ụtọ ịgụ Doug a. Have nwere ezigbo mmata ihe ịchọrọ, yana ihe azụmahịa gị chọrọ.
Daalụ Marty! Naanị were afọ 8?
Daalụ, Doug. Onye ọkwọ ụgbọ ala m na-aga nzukọ abụrụlarị ndị na-ekwu okwu dị mma. N'ọtụtụ oge m na-ahọrọ ịnọ n'ụlọ, echekwara m ọtụtụ puku dollar site na ịzụta akwụkwọ ha naanị - akwụkwọ ndị ahụ nke mere ka ndị ha ruru eru. O doro anya na ọ bụrụ na nke a abụghị ihe dochie anya ahụmịhe ahụ na ịkparịta ụka n'…ntanet… ọ kwesịrị ka a tụlee ya. N'ihi ya, enwere m mmetụta na enwere m akụ na ụba miri emi nke m nwere ike ịleta ugboro ugboro.